विदेश बसाई पछि गाउँ फर्केका युवा पानी र सरसफाइ सुविधा देखेपछि दंग – WASHKhabar
विदेश बसाई पछि गाउँ फर्केका युवा पानी र सरसफाइ सुविधा देखेपछि दंग
१५ बैशाख २०७८, बुधबार ०६:२४ 225 पटक हेरिएको
उदयपुर : लामो समय विदेश बसाई पछि गाउँ फर्किदा उदयपुरको बेलका नगरपालिका ६ तीनतलेका विवेक राई दंग पर्नुभयो । गाउँ छोड्ने बेला चर्पी समेत नभएको गाउँमा विदेश बसाई पछि गाउँमा आउँदा हरेक घरमा धारा, चर्पी र सरसफाइ सम्बन्धी बानी व्यवहारमा आएको परिवर्तनले उहाँ दंग हुनुभएको हो ।
‘म विदेश जाने बेलामा मुश्किलले एक दुई घरमा मात्र चर्पी थियो । अहिले त चर्पी नभएको घरै छैन । पानी खोलाबाट ल्याउनु पथ्र्यो । अहिले त घरको आँगनमै धारा रहेछ । बर्षौबर्ष नभएको विकास विगत चार बर्षको अवधिमा भएछ ।’ विवेकले पहिले देखेको गाउँ र अहिलेको गाउँको फरक प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विवेक राईले भने जस्तै, घर आँगन चिटिक्क पार्नुपर्ने, हरेक घरमा पानीको धारा हुनुपर्ने, धारा सँगै भाँडा सुकाउने चाङको व्यवस्था र चाङमा टिलिक्क टल्केका भाँडाकुँडा राख्नुपर्ने बेलका नगरपालिका ६ तीनतले गाउँको नियम जस्तै बनेको छ । सरसफाइको न्यूनतम यो मापदण्ड, एउटा घरले मात्र नभई गाउँभरिका सबैजसो घरले अपनाएकै हुन्छ । घरघरमै पानीको व्यवस्था भएपछि सरसफाइ गर्न र वस्तुभाउ पाल्न सजिलो भएको तीनतलेका बासिन्दा बताउँछन् ।
लामो समय विदेश बसेर आएका राईलाई सरसफाइका यी सुविधाहरु उपभोग गर्न पाएपछि गाउँमा पनि कुनै कुराको अभाव महसुस भएको छैन । राई भन्नुहुन्छ ‘मानिसलाई मुख्य चाहिने त खानेपानी, सरसफाइ, बाटोघाटो जस्ता आधारभूत सुविधा नै हो, यी सबै सुविधा गाउँमै उपलब्ध भएपछि जिन्दगी कति सहज हुने रहेछ, मलाई पहिले जस्तो विकट लागेकै छैन ।’ उहाँले पहिलेको तुलनामा गाउँमै बिजुली, बाटोघाटो र शिक्षाको समेत व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।
‘गाउँमै यस्ता सुविधा भएपछि मानिस सुविधा खोज्दै किन शहरतिर जान्छन् ? जाँदै जाँदैन नि ? विदेशमा जानुको कारण पनि त्यही हो । विदेशमा दुःख गर्नु भन्दा त आफ्नै गाउँमा पसिना बगाउने सोच आउँछ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
तीनतले, स्वच्छ र सफा क्षेत्र घोषणा भएको गाउँ हो । तीनतलेलाई २०७५ साल वैशाख १६ गते स्वच्छ र सफा क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिको आर्थिक सहयोगमा, समाजसेवी समुह नेपालले तीनतलेमा खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिएको थियो । खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी क्रियाकलापबाट सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणका लागि आवश्यक सूचकहरु पूरा भएपछि तीनतलेलाई सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
त्यसबेला तीनतले गाउँलाई स्वच्छ र सफा क्षेत्र घोषणाका लागि खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरेको समाजसेवी समूह नेपालका टिम लिडर विनोद कुमार कार्की भन्नुहुन्छ ‘सरसफाइ अभियानको क्रममा सञ्चालित सरसफाइ सम्बन्धी क्रियाकलापहरुले समुदायको व्यवहार परिवर्तनमा ठूलो सघाउ पुगेको छ ।’
उहाँका अनुसार अहिले हरेक घरले शौचालयको सुरक्षित प्रयोग गरिरहेका छन् । खानेपानीलाई कुनै न कुनै विधिबाट शुद्धिकरण गरेर मात्र पिउन थालेका छन् । वातावरण सफा राख्न बाटोघाटोमा समेत फोहोरलाई संकलन गर्ने टोकरीको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै समय पानीको चरम अभाव खेप्न बाध्य तीनतलेका बासिन्दालाई अहिले पानीको दुःख छैन ।
स्वास्थ्य नै धन हो । स्वस्थ जीवनका लागि सरसफाइ अपरिहार्य छ । सरसफाइका लागि घर आँगन सफा गरेर मात्र पुग्दैन । व्यक्तिगत, घरायसी र वातावरणीय सरसफाइबाट मात्र स्वस्थ जीवनको परिकल्पना सम्भव छ भन्ने कुरा तीनतलेका बासिन्दाले राम्ररी बुझेका छन् ।